Linn Ko: January 2014
Running Games လေးတွေ ကြိုက်တယ့် သူတွေအတွက် လာပါပြီဗျ....
ဟာသ ဆန်ဆန်လေးပေါ့ဗျာ... ကဲ ယူကြပါဦးလို့
Android Phone / Tablet တွေအတွက် 23 ရက်နေ့ကထွက်လာတဲ့ Viber Version 4.2.0.1656 ကို ရယူနိုင်ပါပြီ မပြောချင်တဲ့နံပါတ်တွေကို Block လုပ်လို့ရသွားပါပြီ
Posted by Linn Ko at 2:41 PM No comments:
ကျွန်တော်လည်း အသည်းအသန်ရှာလိုက်ရတဲ့ ” Firmware ”
လေးကို အားလုံးလည်း သိအောင်ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
ဆရာတွေတော့မပါဘူးနော် ကျွန်တော်တို့ လို့” Learning User ” တွေပဲပြောတာပါ
Download ( G610-U20-V100R001C96B116 )
Download ( G610-U20-C00 )
Credit to MMSD(Myanmar Mobile Software Developer)
Posted by Linn Ko at 11:49 AM 1 comment:
Wallpaper လှလှ ကြိုက်သူတွေ အတွက် အလန်းစား Live Wallpaper လေး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
နာရီလည်း ကြည့်ရင်း Wallpaper လေးလည်း တင်ရင်ပေါ့ဗျာ....
ပုံပါအတိုင်းလေးကတော့ အရမ်းမိုက်တယ်ဗျ နော်.... Play Store မှာတော့ $1.49 ပေးပြီး ဝယ်ရမှာ
Posted by Linn Ko at 11:25 AM No comments:
ဆေးပညာ လေ့လာလိုက်စားနေသူတွေအတွက် အထူးအသုံးဝင်မယ့် App လေး လာပါပြီဗျာ...
လူသားတွေရဲ့ ကြွက်သားတွေ အရိုးတွေ အကြောင်းကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ 3D ရုပ်ပုံတွေနဲ့ ပြထားပါတယ်...
Android Market ထဲမှ တစ်ခုတည်းသော True 3D နဲ့ Muscle Anatomy App လို့ ဆိုထားပါတယ်
Android phone/Tablet ကိုင်ဆောင်သူတွေ အတွက် အပျင်းလည်း ပြေ..ပညာလည်းရတဲ့ Magic Piano လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ် .. Magic Piano ဆိုတဲ့အတိုင်းတကယ့် ကို ပဉ္စလက် ဆန်တဲ့ Piano လေးပါ … ကိုယ်ကိုယ် တိုင် က Piano နဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဘာမှ သိထားစရာမလိုပါဘူး
Labels: Android Application, Android Game
မိန်းကလေးတွေ အကြိုက်တွေ့မယ့် ဂိမ်းလို့ ထင်ပါတယ်... Pou ဂိမ်းလိုမျိုး ဆော့ရတယ့် ဂိမ်းလေးပါ..
App Version က 1.6.1 ဖြစ်ပြီးတော့ Android Version 2.2 နဲ့ အထက်ဆိုရင် ဆော့လို့ ရပါပြီ..
ဂိမ်းဖိုင်ရဲ့ Size ကတော့ 22.9 MB ရှိပါတယ် ... လိုချင်သူတွေ အောက်မှာ Download လုပ်သွားလိုက်ပါ..
Posted by Linn Ko at 12:51 PM No comments:
ကဲ အခြား ဂိမ်းတွေလည်း ဆော့တာများနေပြီဆိုတော့ ဒီတစ်ခါ ကားပြင်လိုက်ကြရအောင်ဗျာ..
Posted by Linn Ko at 12:09 PM No comments:
ဆိုင်ကယ်လေးနဲ့Stunt ပြကြတာပေါ့ဗျာ... အပြင်မှာ တကယ်ဆိုရင်တော့ ကျိုးပဲ့မှာတွေ
ကြောက်နေရသေး... ခုတော့ အေးဆေးပါ.. ဖုန်းထဲမှာပဲ Stunt ပြကြတာပေါ့...
Screenshot လေးတွေ ကြည့်ပြီး ကြိုက်ရင် ဒေါင်းသွားလိုက်ပါဗျာ...
Posted by Linn Ko at 11:11 AM No comments:
Robocop v1.0.3 (Official Game) for Android (Modded)
ကဲ နာမည်ကြီး ရုပ်ရှင်လေးကတော့ ဂိမ်းအဖြစ်ထွက်လာပါပြီဗျာ... ခိုးပြီးသားလေးနော်..
Size လေးက 80 MB ကျော်ကျော် လေးရယ်ပါ... အတိအကျဆိုရင် 80.08 MB ဗျ
Posted by Linn Ko at 10:46 AM No comments:
GMD Gesture Control ဆိုတာကတော့ အရမ်းကို လန်းလွန်းတယ့် Application လေး တစ်ခုပါ...
ဒါပေမယ့် Rooted User တွေ အတွက်ပဲ အဆင်ပြေမှာပါ.... သူကတော့ Gesture တွေနဲ့ Control လုပ်လို့ရတယ့် Application လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်...5Fingers အထိ Gesture မျိုးစုံနဲ့ အသုံးပြုလို့ ရလို့
ကျွန်တော်တို့တွေနေထိုင်နေကြတယ့် ပတ်ဝန်းကျင်ကြီးမှာ ရှောင်လွဲလို့ မရတယ့် တစ်ချို့အရာ
လေးတွေ ရှိပါတယ်...ဒီထဲမှာ Unit တွေလည်း အပါအဝင်ပေါ့..... စီးပွားရေးသမားတစ်ယောက်အတွက်..
$ တွေ Kyat တွေ လိုသလို... နည်းပညာသမားတွေ အတွက်လည်း GHz တို့ MHz တို့ လိုအပ်ပါတယ်...
Posted by Linn Ko at 10:09 AM No comments:
Posted by Linn Ko at 2:25 PM 1 comment:
Posted by Linn Ko at 2:17 PM No comments:
iPad Mini Firmware Collection (All Model Official)
Posted by Linn Ko at 1:34 PM No comments:
6.0.2 (11B554a) AppleTV3,1_6.0.2_11B554a_Restore.ipsw
6.0.1 (11B511d) AppleTV3,1_6.0.1_11B511d_Restore.ipsw
6.0.0 (11A502) AppleTV3,1_6.0_11A502_Restore.ipsw
Posted by Linn Ko at 12:56 PM No comments:
Facebook ရဲ့ Official Update လေးပါ... အောက်မှာ Download ရယူလိုက်ပါ....
PlayStore မှာတော့ ဖုန်းနဲ့ လိုက်ပြီး Update ကို ဖုန်းနဲ့ လိုက်ပြီး Version ကွာပါလိမ့်မယ်
Dropbox 50Gb လိုချင်သူတွေတွက် Dropbox 50Gb ရအောင်လုပ်နည်းလိုအဆင့်မများပဲ လွယ်ကူပြီး Dropbox နဲ့တူတဲ့ Box ကို 50GB ရယူလိုက်ပါ
Posted by Linn Ko at 10:08 AM No comments:
ရှင်းရှင်းပြောရရင် ကြိုးချည်နည်းတွေ စုထားတာလေးပေါ့... တစ်ခါမှ မမြင်ဖူးတယ့်
ကြိုးချည်နည်းတွေတောင် ပါတယ်ဗျာ.... Version 1.2 လေးပါ... ဈေးကြီး Application
လေးဗျ... ပြောရရင် Google Play Store မှာ US $4.99 ပေးရတယ်ဗျ... မယုံရင်
ဒီမှာ သွားကြည့်ကြည့် ... ကျွန်တော်ကတော့ အလကား ပေးမှာပါ... (တကယ်တော့ သူများ
ဆီက "မ" လာတာ ဗျ.... ဟီးဟီးဟီး) ကြိုက်တယ်ဆိုရင် အောက်ဆုံးမှာ Download Link
Posted by Linn Ko at 11:01 AM No comments:
Angry Birds Star Wars II Game လေးပါ.... အားလုံးသိပြီးသား ဂိမ်းလေးဆိုတော့ အထွေအထူးပြောမနေတော့ပါဘူး... လိုချင်သူတွေ Download ဆွဲသွားလိုက်ပါနော်...
Play Store မှာတော့ 0.99$ ပေးဝယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
Android 2.3 နဲ့ အထက်မှာ ဆော့ကစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်....
အောက်မှာ Detail အပြည့်အစုံ ပေးထားပါတယ်.. (Modded Game လေးနော်)
Posted by Linn Ko at 10:28 AM No comments:
Slide Launcher လေးပါ... Side Bar App လိုမျိုးသုံးရတာလေးပါပဲ...
0% RAM and Battery Usage လို့ ဆိုထားပါတယ်... လုံးဝ Memory မစားဘူး
Battery မစားဘူးပေါ့ဗျ.... သုံးကြည့်ပါ... Screenshot နဲ့တင် သေလောက်တယ်နော်...
Posted by Linn Ko at 10:05 AM No comments:
iPhone/iPad/iPod Touch ကိုင်ဆောင်သူများအတွက် Cydia Apps တွေကို Home Screen ပေါ်တွင် ဖျက်ပစ်နိုင်မယ့် Cydelete for iOS7 ဖြစ်ပါတယ်..အရင်တုန်းကတော့ Cydia Apps တွေကို Cydia ၀င်ပြီးမှ ဖျက်ပစ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ် ..အခုတော့ အဲအခြေအနေကနေလွတ်မြောက်ပါပြီ။ အင်တာနက်လည်း
Labels: General, iOS Application
Android Phone /Tablet ကိုင်ဆောင်သူများအတွက် ဖုန်းထဲမှာတင် Root ပြုလုပ်နိုင်မယ့် VRoot ဖုန်းဗားရှင်းကို Mgyun-team ကနေထုတ်ပေးလိုက်ပါပြီ။ Vroot ကိုအရင်က ကွန်ပျူတာဗားရှင်းအတွက်ပဲထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး အခုတော့ ဖုန်းအတွက်လည်း
Posted by Linn Ko at 9:54 AM 1 comment:
Reborn Cydia iOS 7..(Solving Disappear Cydia Icon on iDevice after Jailbreak)
iOS 7+ အတွက် Jailbreak ထွက်လာပြီးကထဲက ကလိလိုက်ကြတာ… ကလိလိုက်ကြတာ…
Tweaks တွေက iOS7နှင့် အလုပ်လုပ်နိုင်ပြီလားဆိုတာလည်း မစူစမ်းမိပဲ အရင်တုန်းက ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ Tweaks မှန်သမျှတွေ အကုန်သွင်း… ပြီးသွားတဲ့ အခါကြတော့ Crash တွေဖြစ်လိုက်ကြတာ မနည်းဘူးပါပဲ။
တစ်ချို့က App တွေ ဖွင့်မရတော့ဘူး၊ အချို့က ပန်းသီးမှာတင် တစ်နေကြတယ်၊ အချို့က Cydia ပျောက်သွားတယ်… စုံသမှ.. သိပ်စုံ…
အဲဒီအထဲကမှ Jailbreak ဖြစ်နေပါလျှက် “Cydia” ပျောက်နေတာက ထီပေါက်ပြီး ထီလက်မှတ် ပျောက်နေသလို နေမထိထိုင်မသာ ဖြစ်ရပါတယ်။
Jailbrek ဖြစ်ထားမှန်းလဲသိတယ်၊ Tweaks တွေလည်း အလုပ်လုပ်တယ်၊ Cydia တစ်ခုပဲ ဆင်းပြေးသွားတာ ဘယ်လိုက်ရှာလို့ ရှာရမှန်းမသိ…
Huawei G730 Myanmar Font APK (Root is Access Needed)
Huawei G730 Myanmar Font APK
Huawei G730 အတွက် မြန်မာဖောင့်ကို APK အနေနဲ့ Mpx မှ ကိုရဲလင်းအောင် မှ တီထွင်ပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
One Click APK ဖြစ်တဲ့ အတွက် သုံးရတာ အရမ်းအဆင်ပြေလွန်းပါတယ်
Photo Save Pro for Facebook v1.3 လေးပါ...လက်ရှိ Latest Version လေးပေါ့... Official Facebook Application ကနေ ပုံလေးတွေကို တိုက်ရိုက် Download လုပ်နိုင်တယ့် ကောင်လေးပါ.. ဖိုင်ဆိုဒ်ကလည်း 243 KB ပဲ ရှိပါတယ်.... Google Play Store မှာ2$ ပေးရမှာပါ.. ဒီမှာတော့ FREE ပေါ့...
Posted by Linn Ko at 4:37 PM No comments:
နာမည်ကြီး ဂိမ်းလေးပါပဲ .. အခုကတော့ ခိုးပြီးသားပေါ့နော်... ကြိုက်တာဝယ် Free ပဲ...
ဒေါင်းပြီး ဆော့ကြည့်ကြပါ... APK က Install လုပ်ပြီးရင်
သူရဲ့ Data File ကို ထပ်ဒေါင်းရပါလိမ့်မယ်... ပြီးရင်တော့ ကစားရုံပဲပေါ့ဗျာ...
Posted by Linn Ko at 3:01 PM No comments:
Puzzle ဂိမ်းလေးပါ... ရတနာတွေ ရှာရတာပေါ့ဗျာ... ဆော့လို့ အရမ်းကောင်းပါတယ်...
အောက်မှာရယူနိုင်ပါတယ်.... ဥာဏ်လေးတွေ လန်းသွားအောင် ဆော့လိုက်ပါ....
Puzzle ပေါင်းများစွာက စောင့်ကြိုနေပါတယ်လို့...
Posted by Linn Ko at 2:54 PM No comments:
Posted by Linn Ko at 2:09 PM No comments:
ကဲ Candy Crush Saga ကြိုက်တယ့် သူငယ်ချင်းတွေ ကြိုက်မယ် ထင်ပါရဲ့ဗျာ...
ဆော့ကြည့်ကြပါဦးလား... အသစ်လေးဆိုတော့ ကြိုက်ကြမယ်ထင်ပါရဲ့...
အောက်မှာ Download လုပ်ပါခင်ဗျာ...
Posted by Linn Ko at 1:01 PM No comments:
Posted by Linn Ko at 1:59 PM No comments:
This simple volume control app, controls / manage the every sound your device makes.It simply acts asavolume /audio equalizer or audio manager for your android phone, With individual access to all Android audio streams, this app puts you in control of every sound
Posted by Linn Ko at 1:35 PM No comments:
Pixlr Express isafun photo editor that lets you quickly crop, resize, and fix any picture, remove red-eye, and whiten teeth. Next, choose from the huge variety of effects, overlays, and borders to personalize any image. From the makers of Pixlr-o-matic, Pixlr Express will
Posted by Linn Ko at 1:30 PM No comments:
Posted by Linn Ko at 1:29 PM No comments:
Posted by Linn Ko at 1:27 PM No comments: